Where ( eg. Alone, Hlaing,Yankin...) Yankin Ahlone Bahan Botahtaung Dagon Dagon Seikkan Dala Dawbon East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Insein Kamayut Kyauktada Kyeemyin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingalar Taung Nyunt Mingalardon North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Gyi Kha Naungto Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Tarmwe Thaketa Than Lyin Thingangyun Yankin
Welcome to Yankin
Yankin Township is located in the north-central part of Yangon. The township comprises 15 wards, and shares borders with Mayangone township in the north, Thingangyun township and South Okkalapa township in the east, the Inya Lake, Bahan township and Mayangone township in the west, and Tarmwe township in the south. The township has twelve primary schools, seven middle schools and two high schools.
Near around 2,000 businesses, total over 15,000 employees working in these respective businesses, Total Area:5sq km – Density: 14,103/sq km, Total Population 70,946 people living in this township. Postal Codes – 11081
Yankin isathriving commercial hub of Yangon. Yankin Centre isaleading shopping destination in Yangon, attracting shoppers from around the city. Saya San Road is the main thoroughfare that runs through most of the important places in the township. The Kokkine Swimming Pools and the 18-hectare (44.5-acre) Myakyuntha Amusement Park are both located here. In 2008, the National Library of Myanmar moved toanew site in Yankin Township. In 2011,anew children's hospital opened in the township, occupying the site of an old Ministry of Mining building.
The Moekaung Pagoda is the principal pagoda of the area, and the annual Moekaung Pagoda Festival attractsanumber of people from around the city. Yankin means Free of Strife. The name was given by King Alaungpaya of Konbaung Dynasty in 1755 after he had conqueredasmall village named Thanlyin Kin as part of his reunification of the country. Yankin was home toanumber of government ministry headquarters before they were moved to Naypyidaw in 2006. The Central Bank of Myanmar, the Ministry of Interior, the Ministry of Industries 1, the Ministry of Industries 2, the Ministry of Mines and the Ministry of Forestry all had their main offices here. Yankin Apartments was part of one of the many public housing programs implemented by U Nu's government.
Yankin isamix of the upscale and middle-class area withamulti-ethnic character. The township hasalarge Tamil community, andarich collection of Hindu temples, (most of which are dedicated to Kali and Ganesh) as well asalarge Chinese temple called Fushan Temple, believed to be the largest in Yangon.
ရန်ကင်းမြို့နယ် သည် တချိန်တခါက ကံဘဲ့မြို့မ အမည်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ် အပြင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး အင်းစိန်ခရိုင်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်များထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ရန်ကင်းတိုက်တန်းများ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထက်တွင် မြို့နယ်များ ပြန်လည်သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသည့်အခါ ရန်ကင်းမြို့နယ်ဟု သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က ရပ်ကွက် (၁၆) ခု ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပြင်ဆင်ချက် ပြုခဲ့ရာ၌ အမှတ် (၁၀) ရပ်ကွက်ကို ပယ်ဖျက်ကာ ရပ်ကွက် (၁၅)ခုဖြင့် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်မှာ ယခုတိုင် ဖြစ်သည်။
အကျယ်အဝန်းမှာ ၁ ဒသမ ၉၄ စတုရန်းမိုင် ဖြစ်သည်။ နယ်နိမိတ် အရှေ့ဘက်ခြမ်းကို မီးရထားလမ်းက နှုတ်ခမ်းသပ်ပေးထားပြီး အရှေ့ဘက်နယ်နိမိတ်ကို ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းက စည်းတားပေးထားသည်။ ရန်ကင်းမြို့နယ် ပတ်ပတ်လည်တွင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ တာမွေမြို့နယ်တို့ ဝန်းရံထားသည်။ မြောက်ဘက်တွင် ကျီးတောချောင်း၊ အလယ်တွင် ဆည်မြောင်းချောင်းနှင့် တောင်ဘက်တွင် ခုနစ်ပင်လိမ်ချောင်းတို့ ရှိပြီး ၎င်းတို့သည် အရှေ့ မှ အနောက်သို့ စီးဆင်းပြီး အဓိကကျသည့် ရေနုတ်မြောင်းကြီးများအဖြစ် တည်ရှိနေကြသည်။
Business Collection Group (BCG) မှ ကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များအရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (၂ ၀၀၀)ကျော် ရှိပြီး လုပ်သားအင်အားစု (၁၅ ၀၀၀)ဦး လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ စာရင်းများအရ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လကုန်တွင် လူနေအိမ်ခြေ (၇ ၅၅၂)ခု ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၄ ၅၁၄)စု နေထိုင်လျက် ရှိသည်။ လူဦးရေမှာ (၆၆ ၉၄၉)ဦး ဖြစ်သည်။ ရပ်ကွက်များကို အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက် စသဖြင့် အမှတ်(၁၆) ရပ်ကွက် အထိ အမှတ်စဉ်ထိုးပြီး အမည်ပေးထားသည်။ ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ယခုအခါ အမှတ်(၁၀) ရပ်ကွက် မရှိတော့သဖြင့် အမှတ်(၁) မှ အမှတ်(၉) ရပ်ကွက်၊ ထို့နောက် အမှတ်(၁၁) မှ အမှတ်(၁၆) ရပ်ကွက် အထိ ရှိနေရာ၌ အမှတ်(၁) မှ အမှတ်(၆) အထိ ရပ်ကွက် (၆) ခုသည် အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနပိုင် တိုက်တန်းလျားများ ဖြစ်သည်။ အမှတ်(၇)၊ အမှတ်(၈)၊ အမှတ်(၁၄)၊ အမှတ်(၁၅)၊ အမှတ်(၁၆) ရပ်ကွက်များမှာ လုံးချင်းအိမ်ရာများ ဖြစ်သည်။ သာမန်လက်လုပ်လက်စား အများစုနေထိုင်သည့် ရပ်ကွက်များမှာ အမှတ်(၉)၊ အမှတ်(၁၁)၊ အမှတ်(၁၂)၊ အမှတ်(၁၃) ရပ်ကွက်များ ဖြစ်သည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအနေဖြင့် ထီးထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် မင်းထွန်း ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီသည် ထင်ရှားသည်။
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် အစိုးရပိုင် ရန်ကင်းကလေးဆေးရုံသည် ကုတင် (၅၅၀)ဆံ့ ဆေးရုံဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဆေးရုံမှာ ကုတင် (၁၀)ဆံ့ ဆေးရုံငယ် ဖြစ်သော လင်းပါရဂူ ဆေးရုံရှိသည်။
အစိုးရပညာရေးကဏ္ဍတွင် အဆင့်မြင့် ပညာရေးအတွက် ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ် ရှိသည်။ ယင်းနှင့်အတူ လေ့ကျင့်ရေးအလယ်တန်းကျောင်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက် ရှိသည်။ အခြေခံပညာရေးတွင် အထက်တန်းကျောင်း (၂)ခု၊ အလယ်တန်းကျောင်း (၆)ခု၊ မူလတန်းကျောင်း (၁၂)ခု၊ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း (၃)ခု ရှိသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း (၁)ခု ရှိသည်။
စွမ်းအင်ကဏ္ဍအနေဖြင့် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီအရောင်းဆိုင် မရှိချေ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့အရောင်းဆိုင်လည်း မရှိချေ။ ဟိုတယ်ကဏ္ဍတွင် လူသိများ ထင်ရှားသည့် ဟိုတယ်ကြီး (၂)ခု ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ အခန်းပေါင်း (၇၃၁) ခန်း ရှိသော ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့် Sedona Hotelနှင့် အခန်းပေါင်း (၁၈၃) ခန်းပါသည့် Mercure Hotel တို့ ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ဟိုတယ် (၁၂) ခု ရှိသည်။
စာပို့သင်္ကေတ အမှတ်မှာ ၁၁၀၈၁ ဖြစ်သည်။
ရန်ကင်းမြို့နယ်သို့ ဝိုင်ဘီအက်စ်ဘတ်စ်လိုင်းများ ဖြစ်သည့် ၁၂၊ ၁၄၊ ၂၉၊ ၃၈၊ ၄၃၊ ၆ဝ၊ ၈၇ တို့ ပြေးဆွဲလျက် ရှိသည်။ မြို့ပတ်ရထားလမ်းပိုင်းသည် တစ်မိုင် အရှည်ရှိပြီး ဘူတာများမှာ ပါရမီဘူတာ၊ ကံဘဲ့ဘူတာ၊ ဘောက်ထောက်ဘူတာတို့ ဖြစ်သည်။
ထင်ရှားသည့် စေတီပုထိုးမှာ မိုးကောင်းစေတီတော် ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသည့် ဈေးများမှာ စံပြရန်ကင်းဈေး၊ ရန်ကင်းမြို့မဈေး၊ ကံဘဲ့ဘူတာဈေး၊ ဘောက်ထော်ဈေးတို့ ဖြစ်သည်။ ကုန်တိုက်မှာ ရန်ကင်းစင်တာဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေရန် ပန်းခြံများမှာ သုခဝတီပန်းခြံနှင့် ရန်ကင်းပန်းခြံတို့ ဖြစ်သည်။
Yankin Demographic & Economic Activities
Total Population 70,946*
Area (km2) 5.0**
Population Density (persons per km2) 14103.9
Number Of wards 15
Population In Conventional HouseHolds 66,792 66,792
Number Of Convetional Households 14,637 14,637
•In Yankin Township, there are more females than males with 86 males per 100 females.
•The entire population of the Township lives in urban areas.
•The population density of Yankin Township is 14,104 persons per square kilometre.
•There are 4.6 persons living in each household in Yankin Township. This is higher than the Union average.
Productions 26 536
Retails 609 2381
Wholesales 109 1446
Services 1117 9882
Trading 55 906
All about Yankin
: Daw Zin Mar Aung
: +959794 788 680
: +959420 029 063
: Daw Thida
: +959250 516 701
: U Thein Zaw
: +9595127 156
Address : Rm 1, Bldg 21, Yan Shin St., Shwe Ohn Pin Housing,
Phones : 09-49593175
New Super Industrial Co., Ltd.
Address : 38, Rm 302, 3rd Flr, Moe Kaung Rd.,
Phones : 09-73162291, 09-450000920, 01-572582, 01-8551160, 09-5146818
Category : Shipping Transportation Services
Category : Plastic Mould Services